१ कोरिन्थी ७ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१ कोरिन्थी ७:१-४०
७ अब तिमीहरूले लेखेको कुराको विषयमा म के भन्छु भने, पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै बेस हो। २ तर अवैध यौनसम्बन्ध* व्याप्त भएकोले हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी अनि हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्। ३ पतिले आफ्नो पत्नीलाई दिनुपर्ने हक देओस् अनि पत्नीले पनि पतिलाई त्यसै गरोस्। ४ पत्नीको आफ्नो शरीरमाथि अधिकार हुँदैन तर उसको पतिको हुन्छ; त्यसैगरि पतिको पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार हुँदैन तर उसकी पत्नीको हुन्छ। ५ तिमीहरू एक-अर्कालाई यस हकबाट वञ्चित नगर। प्रार्थनामा समय बिताउन तिमीहरूले त्यसो गर्नु परे तापनि आपसी समझदारीमा अनि समय तोकेर मात्र गर। त्यसपछि तिमीहरू फेरि एकसाथ होओ, ताकि तिमीहरूको आत्मसंयमको कमीले गर्दा सैतानले तिमीहरूलाई प्रलोभनमा पार्न नपाओस्। ६ तथापि, म यो आज्ञाको रूपमा त होइन तर तिमीहरूको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर भन्दैछु। ७ तर हरेक पुरुष मजस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि, हरेकले परमेश्वरबाट आ-आफ्नै वरदान पाएका हुन्छन्‌, कसैले यस्तो त कसैले त्यस्तो। ८ अब म अविवाहित अनि विधवाहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि तिनीहरू मजस्तै रहनु नै तिनीहरूका लागि बेस हो। ९ तर यदि तिनीहरूसित आत्मसंयम छैन भने विवाह गरून्‌, किनकि कामवासनाले जल्नुभन्दा विवाह गर्नु नै बेस हो। १० विवाह गरेका मानिसहरूलाई म, म होइन वास्तवमा प्रभु यस्तो निर्देशन दिनुहुन्छ: पत्नी आफ्नो पतिबाट अलग नहोस्। ११ यदि अलग हुन परिहाल्यो भने कि त अविवाहित बसोस् कि पतिसित फेरि मिलाप गरोस्। पतिले पनि आफ्नी पत्नीलाई त्याग्नुहुँदैन। १२ त्यसैगरि अरूलाई म, हो, प्रभु होइन तर म यसो भन्छु: यदि कुनै भाइकी पत्नीको बेग्लै आस्था छ र ऊ आफ्नो पतिसित बस्न राजी छे भने उसले उनलाई नत्यागोस्। १३ अनि कुनै स्त्रीको बेग्लै आस्था भएको पति छ र ऊ आफ्नी पत्नीसित बस्न राजी छ भने उनले आफ्नो पतिलाई नत्यागोस्। १४ किनकि बेग्लै आस्था भएको पति आफ्नी पत्नीसितको सम्बन्धले गर्दा पवित्र ठहरिन्छ, त्यसैगरि बेग्लै आस्था भएकी पत्नी आफ्नो ख्रीष्टियन पतिसितको सम्बन्धले गर्दा पवित्र ठहरिन्छे। नत्र त तिमीहरूका छोराछोरी परमेश्वरको नजरमा साँच्चै अशुद्ध हुनेथिए तर तिनीहरू अहिले पवित्र छन्‌। १५ तर यदि बेग्लै आस्था हुनेचाहिं अलग हुन्छ भने उसलाई अलग हुन देऊ। यस्तो परिस्थितिमा भाइ वा बहिनी बन्धनमा रहँदैन, किनकि परमेश्वरले तिमीहरूलाई शान्तिमा रहन बोलाउनुभएको हो। १६ किनकि ए पत्नी हो, आफ्नो पतिसित बस्यौ भने तिमीले आफ्नो पतिलाई बचाउन सक्छयौ कि के थाह? अनि ए पति हो, आफ्नी पत्नीसित बस्यौ भने तिमीले आफ्नी पत्नीलाई बचाउन सक्छौ कि के थाह? १७ यहोवाले हरेकलाई जे-जस्तो भाग दिनुभएको छ अनि जे-जस्तो अवस्थामा बोलाउनुभएको छ, हरेक मानिस त्यसबमोजिम चलोस्। अनि म सबै मण्डलीहरूलाई यही आदेश दिन्छु। १८ के कुनै मानिसलाई खतना* भएको अवस्थामा बोलाइएको थियो? त्यसोभए ऊ त्यही अवस्थामा रहिरहोस्। के कुनै मानिसलाई खतना नभएको अवस्थामा बोलाइएको थियो? त्यसोभए उसले खतना नगरोस्। १९ खतना हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन, न त खतना नहुनु नै, तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु ठूलो कुरा हो। २० हरेकलाई जे-जस्तो अवस्थामा बोलाइएको थियो, ऊ त्यही अवस्थामा रहिरहोस्। २१ के तिमी दास छँदा बोलाइएका थियौ? त्यसोभए त्यसको चिन्ता नगर। बरु यदि तिमी पनि स्वतन्त्र हुन सक्छौ भने मौकाको फाइदा उठाऊ। २२ किनकि जसलाई दास छँदा बोलाइएको थियो, ऊ प्रभुको स्वतन्त्र मानिस हो। त्यसैगरि, जसलाई स्वतन्त्र छँदा बोलाइएको थियो, ऊ ख्रीष्टको दास हो। २३ तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ, त्यसैले मानिसहरूको दास बन्न छोड। २४ भाइहरू हो, हरेकलाई जे-जस्तो अवस्थामा बोलाइएको थियो, परमेश्वरसित गाँसेको सम्बन्धलाई कायम राख्दै ऊ त्यही अवस्थामा रहिरहोस्। २५ अब जो कौमार्य अवस्थामा छन्‌, तिनीहरूका लागि मसित प्रभुले दिनुभएको कुनै आज्ञा छैन। तैपनि प्रभुबाट कृपा पाएर विश्वासयोग्य भएको व्यक्तिको हैसियतले म आफ्नो राय दिन्छु। २६ मलाई लाग्छ, हालको कठिन परिस्थितिलाई विचार गर्दा एक जना पुरुष अहिले जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा रहिरहनु नै बेस हो। २७ के तिम्रो पत्नी छ? त्यसोभए ऊबाट मुक्त हुन नखोज। के तिम्रो पत्नी छैन? त्यसोभए पत्नी खोज्न छोड। २८ तर तिमीले विवाह गऱ्यौ भने पनि कुनै पाप गरेका हुनेछैनौ। त्यसैगरि, जो कौमार्य अवस्थामा छ, उसले विवाह गऱ्यो भने कुनै पाप गरेको हुनेछैन। तथापि, जसले विवाह गर्छ, उसले शारीरिक दुःखकष्ट झेल्नेछ। तर म तिमीहरूलाई त्यसबाट जोगाउन चाहन्छु। २९ यसबाहेक, भाइहरू हो, म के भन्छु भने समय थोरै मात्र बाँकी छ। त्यसैले ज-जसको पत्नी छ, तिनीहरू पत्नी नभएजस्तै होऊन्‌। ३० त्यसैगरि, रुनेहरू नरुनेहरूजस्ता, रमाउनेहरू नरमाउनेहरूजस्ता, किनमेल गर्नेहरू आफूसित केही नभएजस्ता, ३१ अनि संसारको उपभोग गर्नेहरू त्यसको पूरा उपभोग नगर्नेहरूजस्ता होऊन्‌, किनकि यस संसारको दृश्य परिवर्तन हुँदैछ। ३२ निस्सन्देह, तिमीहरू निष्फिक्री होओ भनी म चाहन्छु। अविवाहित पुरुषले कसरी प्रभुलाई खुसी पारूँ भनी प्रभुकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छ। ३३ तर विवाहित पुरुषले कसरी पत्नीलाई खुसी पारूँ भनी संसारकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छ ३४ र उसको मन विभाजित हुन्छ। त्यसैगरि, अविवाहित स्त्रीले अनि कुमारीले आफ्नो शरीर अनि दिमाग दुवै कसरी चोखो राखूँ भनी प्रभुका कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छे। तथापि, विवाहित स्त्रीले भने कसरी आफ्नो पतिलाई खुसी पारूँ भनी संसारकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छे। ३५ तर तिमीहरूकै फाइदाका लागि म यो भन्दैछु। म तिमीहरूलाई फन्दामा पार्न त चाहन्नँ, बरु जे तिमीहरूका लागि उचित छ, त्यो गर्न र कुनै अलमलविना निरन्तर प्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई उत्प्रेरित गर्छु। ३६ यदि कसैलाई आफ्नो यौनइच्छालाई काबूमा राख्न सक्दिनँ* भन्ने लाग्छ र यस्तो अवस्थामा विवाह गर्नु नै उचित हो भनी ठान्छ भने बैंस पार गरिसकेको भए उसले विवाह गरोस्; उसले पाप गरेको हुँदैन। यस्ता मानिसहरूले विवाह गरून्‌। ३७ तर विवाह गर्ने आवश्यकता महसुस नभएकोले र आफूलाई काबूमा राख्न सक्ने भएकोले यदि कसैले आफ्नो मनमा अविवाहितै रहने अठोट गरेको छ अनि आफ्नो अठोट बदल्दैन भने उसले असलै गर्छ। ३८ अर्कोतर्फ, विवाह गरेर आफ्नो कौमार्य गुमाउनेले पनि असलै गर्छ। तर जसले विवाह नगरेर आफ्नो कौमार्य गुमाउँदैन, उसले झनै असल गर्छ। ३९ आफ्नो पति जीवित छउन्जेल पत्नी आफ्नो पतिकै बन्धनमा हुन्छे। तर उसको पति मऱ्यो भने उसले जोसित चाहन्छे, उसैसित विवाह गर्न सक्छे, तर प्रभुको चेलासित मात्र। ४० तर मेरो विचारमा ऊ जुन अवस्थामा छे, त्यही अवस्थामा रही भने ऊ झनै आनन्दित हुनेछे। म विश्वस्त छु, मसित पनि परमेश्वरको पवित्र शक्ति छ।
^ १को ७:२ * अतिरिक्त लेख ४ हेर्नुहोस्।
^ १को ७:१८ * लूका १:५९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ १को ७:३६ * शाब्दिक, “यदि कसैलाई आफ्नो कौमार्य अवस्थासित अनुचित व्यवहार गरिरहेको छु।”
१ कोरिन्थी ७